Beer Route - Qamri Best In Europe By tareenka | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Beer Route – Qamri Best In Europe By tareenka
Haddii aad tahay lover biir ah ku heysa inay qaadato hamiday on the wadada ama aad hore u leedahay safar in Europe ah oo ku saabsan buugaag, take a look at the Beer Route by tareenka – Qamri ugu fiican Yurub By tareenka. ma ceeboobi doono in aad! xitaa wanaagsan, mid kasta oo ka mid ah talooyinka our si fudud gaaray by tareenka. No driving loo baahan yahay, taas oo macnaheedu yahay walwal lahayn. Just xiiso leh!
Beer Route By tareenka – Qamri Best In Europe: Saldhigga Tareenka The!
Mid ka mid ah waxyaabaha aanad ogaan karin ayaa ah biir wanaagsan Route by tareenka waxaa laga heli karaa in badan tareenada. Sheffield Tubada The waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan, soo bandhigtay oo ku saabsan 30 casks iyo Istimaalka - qaar ka mid ah kuwaas oo muujinaya doorashada ka Breweries maxalliga ah iyo xoogaa dahsoon. Waxaad ka heli karin tareenka oo la tag booqo qaar ka mid ah ... ama joogo iyo waqti badan ku qaataan iyaga sampling. Sidee qabow?!
Beer Route By tareenka – Qamri Best In Europe: Delirium Village ee Brussels, Belgium
Hadda, tani waa mid ka mid ah in aan si shaqsi ah oo aad u ahayd markii aan soo booqday magaalada Brussels iyo ninkayga jiray hawlgal ay ku helaan Qamri ugu fiican Yurub. tip: Raac maroodiga pink!
Waxaan asal ahaan ka ahay Koonfur Afrika iyo dareemayey yar xiiso ah markii ay booqaneysay Brussels. Sidaas, Aniga qudhaydu waxaan amar ku Castle Lite ka guriga. Dabcan, waxay u lahaa in stock! Tani waxay la yaab ma laha sida delirium Cafe loo yaqaan for dheer biirka liiska, taagan 2,004 noocyada kala duwan ee January 2004 sida laga diiwaan geliyay ah Guinness Book of Records. On dalab waa qamri ka badan 60 dalalka!
bar wuxuu ku yaalaa surin ka yar oo lagu magacaabo cakirnaanta de la Fidelite / Getrouwheidsgang, oo keliya dhowr boqol oo mitir ka Place Grand. The Jeanneke PIS taalada waa wadada laga soo galo.
Magaca bar wuxuu ka yimid biir ah tremens, oo astaanteeda maroodiga casaanka ahi sidoo kale qurxinayso kafeega laga soo galo.
Saldhiga tareenka waa a 10 socod daqiiqo ka cafe, sidaas darteed waa layaabna ma leh waa ku Beer Route by tareenka – Qamri ugu fiican Yurub.
Beer Route By tareenka – Qamri Best In Europe: Idinku Olde Cheshire Jiis in London, England
Waxaan jeclahay taariikhda in la iman this duulaan la cabbo. Daacadii, baar this ma laha xulashada ugu weyn marka loo eego qaar ka mid ah wadamada deriska. Laakiin waxa ay ka maqan tiro kor u dhigaysa waayo, taariikhda tayada ay ku rakiban yihiin. Legend u leeyahay in suufiyadoodii brewed on site ka hor waxay noqotay baar ah. Samuel Johnson iyo Charles Dickens halkan cabbeen, si aad u la qaybsadaan diyaarid ah oo leh taariikh at stop this.
Dhismaha ayaa haatan leedahay Sam Smith Old warshad khamri. Baarar waa ka go-u dhismayaasha quruxda badan, ales dhaqameed, iyo gudaha oo raaxo leh. Ma jiraan wax magac weyn, qurbaannada kaliya cajiib ah ka warshad khamri u gaar ah in Tadcaster, Yorkshire.
Beer Route By tareenka – Qamri Best In Europe: Pilsner Urquell warshad khamri in Pilsen, Czech Republic
In kastoo warshad khamri ah ayaa tan iyo casriyeeyey 1993, ka miles of guryihii gabowga hadhay dhulka hoostiisa waa qayb ka mid ah socdaalada. Burbur dhulka hoostiisa ah wuxuu ku dhammaanayaa alwaax furan oo alwaax ah iyo dhowr foosto oo waaweyn oo alwaax ah oo nooca loo isticmaali jiray in lagu gaboobo dhammaan Pilsner Urquell.
biir The garoonka damacsan foosto super waa, arrin si fudud, biir ugu fiican lager aan abid dhadhamiyey. Oo waa inaad tijaabiso soo baxay naftaada! The Pilsner Urquell warshad khamri idiinku yeedhi inaad qaadato safar gaar ah. Waxaad doono waayo-aragnimo quudhin iyo madadaalada ee guryihii taariikhi ah, bartaan oo ku saabsan geedi socodka yaynana kolna iyo dhadhamin lager ka fiican, Dabcan!
Beer Route By tareenka – Qamri Best In Europe: Germany (MA Munich)
waxaan aad ha karaa on qarsoodi ah a? biir ugu fiican Germany waa ma in Munich. Germany ayaa kala duwan weyn ee qamri gaar ah. Xitaa badan oo dalka ka tacaamulo maalin la yaab leh u fiican yihiin. Laakiin ma biir kasta waxay noqon kartaa mid aad u fiican, xitaa dhulka ay biirku yahay halyeey. Haddii aad raadinayso kala duwan oo aad jeceshahay in aad biir, akhlaaqdiisa iyo sizzle, naftaada raalli sameeyo iyo qorsheeyaan safar ilaa waddankii Bavaria, halkaas oo biir ah waa qayb ka mid ah dhaqanka maxalliga ah oo waxaa brewed by dadka dhabta ah la sheekooyinka inaad u sheegto.
Hoose Bavaria – Niederbayern
Tani stretch dhulka u East of Munich kordhiyay iyada oo Forest Bavarian u borderlands Austria iyo Czech iyo waa mid ka mid ah gobolada ugu yaraan u safray Germany. Taas oo keliya ka dhigaysaa Bavaria Hoose jiidasho ah caga, laakiin taariikhda iyo dhaqanka oo ah biirka dhigi xitaa dheeraad ah oo ku rafcaanka.
Toddobaatan ka mid ah macmacaanka cabbirka yar yar iyo kuwa dhexe shaqeeyaan qayb ka this ee Bavaria. Qaar ka mid ah dib taariikhda in 1400s ah. Kow iyo toban iyaga ka mid ah mid ahaayeen dhismi kaniisadda, maamula Biyac, ama ay leedahay abtirsan. Saddex ayaa weli ku shaqeeya by lid ku Jarmal iyo mid warshad khamri ugu da'da weyn Abbey oo adduunka ah. Hoose Bavaria waa maal qarsoon marka ay timaado biir.
Ma doonaysaa in aad hesho ugu qamri Best in Europe? (Masuuliyad dabcan!) Markaas ballansan safarkaaga Save A tareenka ajuurada Waxaa jira ma peaky qarsoon, taas oo macnaheedu yahay lacag dheeraad ah biirka!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-beers-route-europe%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#Beer #BeerinEurope #qamri BeerTravel travelbytrain